မိုးခေါင်မှုသည်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်းဆွယ်နှင့်အခြားနယ်မြေများ၏နေရာများပိုမိုများပြားလာသည်။ တချို့ကပုံမှန်ဖြစ်စဉ်လို့ပြောကြတယ် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအမြဲတမ်းတူညီတဲ့နိဂုံးချုပ်ဖို့အမြဲတမ်း ဦး တည်သွားစေတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်အမျိုးမျိုး၊ ကာလရှည်ကြာစွာနယ်မြေဒေသများသည်ပိုမိုများပြားလာသည် မိုးခေါင်ခြင်း.
ဒီနေရာမှာသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုး၊ အချက်အလက်နှင့်အခြားခြားနားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်သည် မိုးခေါင်ခြင်း။ သတင်းအချက်အလက်သည်အာဏာဖြစ်သည်၊ သင်တွေ့လိမ့်မည်။
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
မိုးခေါင်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန် Mapama မှစတင်သောလှုပ်ရှားမှု
မိုးခေါင်မှုသည် Mauritania ရှိကလေး ၁၂၀,၀၀၀ ကိုထိခိုက်သည်
por မော်နီကာဆန် လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်ကလေးများအဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်မှုဖြစ်သည်။ ဒါကကံမကောင်းတာကတကယ်တမ်းမရှိတာ ...
လူတွေဟာနေ့တိုင်းစကားပြောနေကြတာနဲ့အမျှစပိန်နိုင်ငံမှာမိုးခေါင်မှုကအရမ်းလေးနက်တယ်။ အဆင့်များရှိမှတ်တမ်းများ ...
ခြောက်သွေ့သောနွေရာသီ ၁၆ ခုအနက် ၆ ခုသည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်
Las Tablas de Daimiel သည်အကြီးအကျယ်မိုးခေါင်သည်
Ciudad Real တွင်တည်ရှိသော Tablas de Daimiel အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်မိုးခေါင်မှုနှင့်မိုးခေါင်မှုကြောင့် ...